ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်အစားအစာများကို ရောင်းချပေးမယ့် Myanmar Tranditional Treasure လုပ်ငန်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အားပေးကြပါ! | Su See Yar - Maynmar's first crowdfunding platform
ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်အစားအစာများကို ရောင်းချပေးမယ့် Myanmar Tranditional Treasure လုပ်ငန်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အားပေးကြပါ!
ပင်မစာမျက်နှာ / ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်အစားအစာများကို ရောင်းချပေးမယ့် Myanmar Tranditional Treasure လုပ်ငန်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် အားပေးကြပါ!
မြန်မာ့ရတနာလုပ်ငန်းသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် (၃၄) ရပ်ကွက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော သဘာဝစားသောက်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ 2017ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ကနေ စတင်ခဲ့ပြီး အဆင့်ဆင့်အကြိမ်ကြိမ် စမ်းသပ်အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့ သဘာဝထွက်ကုန်များ ကိုသာအသုံးပြု ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ စားသောက်ကုန်ခြောက် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော (၅) လခန့်က ဖြစ်ပေါ်လာသော Covid-19ရောဂါ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် လုပ်ငန်း၏လည်ပတ်မှုမှာ လုံးဝရပ်တန့်ခြင်းများ ကြုံလာရပြီး ယခုအချိန်တွင် ပြန်လည်လည်ပတ်ရန်နှင့် ထူထောင်ရန်အတွက် အခက်အခဲများစွာ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ယခုနှစ်ရဲ့ မေလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် လုပ်ငန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ တန်ဖိုးကိုမြင်သာပေါ်လွင်အောင်ဖန်တီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် သဘာဝမှ ပေးသောကောင်းကျိုးများ ကို လူအများပိုမို သိရှိအောင် အားထုတ်ကြိုးစားချင်ပါသည်။
ကလေးသူငယ်လေးများနှင့် အသက်အရွယ်ကြီးသူများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များ ဖြစ်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေးကိုလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အကျိုးပြုပေးပါသည်။
မိမိလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော တောင်ယာစိုက်ပျိုးသူတွေအတွက်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အကူအညီ ဖြစ်စေနိုင်မည့် အခြေအနေမျိုးပြုလုပ်ပေးချင်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစု စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများကို သက်သာ လျော့နည်းစေဖို့ ကူညီထောက်ပံပေးချင်ပါသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အနီးကပ်တွေ့ဆုံခြင်းများကို ရှောင်ရှားပိတ်ပင်ထားသော အချိန်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်ပိုးခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းများအားလုံး ရပ်တံ့သွားခဲ့ရပါသည်။
မှီခိုနေသော ဝန်ထမ်းများကလဲ အမြန်ပြန်လည်ထူထောင်မည့်အချိန်ကို စောင့်မျှော်နေကြသည့်အတွက် သူတို့၏မိသားစုများအတွက်လည်း ပြန်လည်ကြိုးစားချင်ပါသည်။
မိမိအလုပ်တွင်မှီခိုအားထားနေသော ဝန်ထမ်းများကိုလည်း လုပ်ငန်းတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေမျိုး နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည် လည်ပတ်ပြီး လစဉ်ပုံမှန်ကောင်းမွန်သော အထောက်အပံ့များ ပြုလုပ်ပေးချင်ပါသည်။
အသုံးပြုမည့်နေရာ- Covid-19 ကူးစက်ရောဂါ အကြပ်အတည်းကာလ အပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရန်
(အလုပ်ရုံနေရာငှားရမ်းခ၊ ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်အားခများ၊ ကုန်ကြမ်းများဝယ်ယူမှုများနှင့် ကျန်မာရေး၊ လူမှုရေး ဆိုင်ရာများ ကို အသုံးပြုရန်)
မြန်မာ့ရတနာလုပ်ငန်းသည် 2017ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင် အောက်ပါထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းခဲ့ပါသည်။
Traditional Treasure အမှတ်တံဆိပ်
ဝဥကြာဆံ ၊ ဝဥခေါက်ဆွဲ၊ ကန်စွန်းဥကြာဆံ ၊ ကန်စွန်းဥခေါက်ဆွဲ၊ ပြောင်းဆံကြာဆံ၊ ပန်းရောင်ဆား၊ ပျားရည်၊ ဆန်လုံးညို၊ Lady Tea ၊ Healthy Tea နှင့်အရသာပါဝင်ပြီး အသင့်စားကြာဆံခေါက်ဆွဲများ
Momma Choice အမှတ်တံဆိပ်
ဆန်လုံးညို (ကြက်သား၊ မုန်လာဥနီ၊ ပဲနီလေး၊ အာလူး၊ ရေညှိ )အရသာပါဝင်သော အာဟာရဖြည့်စွက်စာ ဆန်ပြုတ်များ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏ ကောင်းကျိုးများကိုဖော်ထုတ်ပြီး တောင်သူလယ်သမားများ အတွက်လည်း အကျိုး ဖြစ်ထွန်း စေရန်။
သစ်သီးသစ်ဖုများကို ဓာတုဗေဒကင်းစင်စေပြီး သဘာဝအတိုင်းကောင်းကျိုး များ ရရှိစေရန်ထုတ်လုပ် ထားပါသည်။
နိုင်ငံအတွင်းရှိသော သဘာဝအခြေခံအရင်းအမြစ်များကို ဦးစားပေး အသုံးပြုထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လူအများ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးရည်ရွယ်ပါသည်။
မိမိတို့၏ ထုတ်ကုန်များအားလုံးသည် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီးကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိပြီး အာဟာရပြည့်ဝစွာ ပါဝင် ပါတယ်။
မြန်မာ့ထွက်ကုန် အဆင့်မြင့်သဘာဝထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်ရန်။
ဘေးကင်းပြီးကကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သဘာဝစားသောက်ကုန်ဈေးကွက်အား နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ စေရန်။
မြန်မာပြည်တွင်းသဘာဝထုတ်ကုန်များကို အဆင့်မြင့်တင်ပြီးနိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့နိုင်စေရန်။
တာဝန်ယူမှုအပြည့်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအပေါ်တွင် လူတိုင်းယုံကြည်မှုရရျိစေရန်
(၁) မြန်မာငွေ၅သောင်းကျပ် (50,000 MMK) အတွက်
Traditional treasure noofle set5item+Healthy tea2box
(၂) မြန်မာငွေ၁သိန်းကျပ် (100,000 MMK) အတွက်
Traditional treasure noofle set5item+Ready to eat noodle set7item+Healthy Tea4box
(၃) မြန်မာငွေ၃သိန်းကျပ် (300,000 MMK) အတွက်
Traditional treasure noofle set5item+ Ready to eat noodle set7item+Healthy Tea4box+Brown rice 1.6kg2pcs
(၄) မြန်မာငွေ၅သိန်းကျပ် (500,000 MMK) အတွက်
Traditional treasure noofle set5item+ Ready to eat noodle set7item+Healthy Tea4box+Brown rice 1.6kg 4pcs+ Momma choice gift set
#ဂျပန်နိုင်ငံမှ ရင်းနှီးငွေထည့်ဝင်သူများအနေဖြင့်ရရှိလာသော အကျိုးမြတ်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှတဆင့် လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
Daw Su Darli Zaw
I was born on4April 1995 to U Zaw Lwin Oo and Daw May Khine Win and I'm the eldest daughter among two children. I got the Higher National Diploma, Victoria University College from June 2011 to August 2014, and got the Diploma from STI University Yangon from August 2014 to December 2014 as well. In May 2013, I joined the Taw Win Family Co., Led as the HR Assistant. And became the Executive Secretary at Timor Leste, Yangon (Executive Secretary to Ambassador Assists all task for Ambassador) in May 2015. I have been transforming Myanmar's natural products into high-quality food products starting from May 2018. Traditional Treasure Brand/Momma Choice Brand has been produced to this day and the company was established in February 2020 under the name Triple-T. Today, the Triple-T Company is producing and distributing high-quality Myanmar natural products all over Myanmar.
No. 580 Corner of South Thayet Road and Tharafi (1) Road. (34) Ward, North Dagon Township, Yangon Region.
For 50,000 MMK
မြန်မာငွေ၅သောင်းကျပ် (50,000 MMK) အတွက် Traditional treasure noofle set5item+Healthy tea2box
For 100,000 MMK
For 300,000 MMK
မြန်မာငွေ၃သိန်းကျပ် (300,000 MMK) အတွက် Traditional treasure noofle set5item+ Ready to eat noodle set7item+Healthy Tea4box+Brown rice 1.6kg2pcs
For 500,000 MMK